Soosaarka Shiinaha Carbon Dheecaan fiber Yan Tuo
Rullaluistemka isku-dhafan ee fiber-ka ah wuxuu leeyahay xiisad hoose iyo firfircooni yar. Feejignaan la’aanteedu waa 1/5 oo keliya tan rollers biraha dhaqameed, oo dhakhso u yeelan kara Bilow ama joogso;
Qaabka Lambar G-01 Daxalka u adkaysta √
Midab Madow Bir Aluminium
Miisaanka 15kg Oogada 3k dhalaalaya / sida loogu baahan yahay
Xirmo Sanduuqa warqadda ， xumbo ，Bacda cadaadiska sare leh Faahfaahinta 1500mm * 255mm * 234mm
Orgin Weihai HS lambar 6815992000
Dhawaan, iyada oo kor loo sii qaadayo warshadaha wax soo saarka gudaha, mashiinada warshadaha ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo baxay jihada tayada sare, waxtarka sare, kaarboonka yar iyo ilaalinta deegaanka. Rullaluistemka isku-dhafan ee fiber-ka ah wuxuu leeyahay xiisad hoose iyo firfircooni yar. Feejignaan la’aanteedu waa 1/5 oo keliya tan rollers biraha dhaqameed, oo dhakhso u yeelan kara Bilow ama joogso; xawaaraha orodka badan, illaa 70% ka dhakhso badan rollers biraha dhaqanka; cillad yar, iska caabin daal wanaagsan, nolol adeeg dheer, hal mar oo maalgashi ah ayaa ka qiimo badan rollers biraha, qiimaha isticmaalka muddada dheer. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha soo saarista ee rollers-yada kaarboon-ka ayaa sidoo kale aad u sarreeya, haddii ay tahay saxnaanta dusha sare ama dheelitirka firfircoonida, iwm, waxay saameyn muhiim ah ku yeelan doontaa waxqabadka mashiinka oo dhan.
Weihai Yantuo Composite Material Technology Co., Ltd., oo siisay tiro aad u tiro badan, oo dhexdhexaad ah iyo kuwo yar yar oo duub ah oo kaarboon duuban ah oo loogu talagalay filimka, waraaqaha, baytariyada lithium, foornooyinka, dharka aan tolnayn, daabacaadda iyo soo saarayaasha mashiinnada kale, ayaa macaamiisha u keenaya . Isla markaa faa'iidooyinka ganacsiga, khibrado badan oo khuseeya dalabyada ayaa sidoo kale la ururshay. Waa kuwan tusaalayaal qaar ka mid ah alaabada shirkadeena loo habeeyay ee roobleyaasha kaarboonka kaarboonka si loo muujiyo faa iidooyinka dalabka rollers-ka fiber-ka ee mashiinnada warshadaha
Codsiga duubista kaarboon kaarboon ee ku duuban warqad duuban iyo waraaqo kale, filim, mashiinnada wax lagu masaxo ee aluminium:
Soosaarka warqadda duubista, iyo sidoo kale inta badan waraaqaha, filimka, iyo alaabada aluminium aluminium, baaxadda iyo xawaaraha khadka ee badeecada duudduuban inta lagu jiro wax soo saarka iyo farsamaynta waxay si toos ah u go'aamisaa wax soo saarka wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka ee dhammaan badeecada. Isla mar ahaantaana, ballaca Kordhinta qiimaha wax soo saarka iyo kororka xawaaraha khadka ayaa sidoo kale saameyn toos ah ku leh qiimaha wax soo saarka. Marka laga hadlayo hawlgalka xad-dhaafka ah ee sarreeya, dhererka dusha sare ee duudduuban ayaa lagu go'aamiyaa xawaaraha muhiimka ah ee duubista. Xawaaraha muhiimka ah ee rullaluistemadka ayaa si qaldan ugu dhigma laba jibbaaran dhererka rullaluistemadka, dhererka rullaluistemadka waa labanlaabmay, xawaaraha xasaasiga ahna wuxuu noqonayaa rubuc ka mid asalka ah
Marka dhererka rullaluistemadka gaadho heer cayiman oo xawaare aad u sarreeya loo baahan yahay, rullaluistemadka laftiisa ayaa looga baahan yahay inuu lahaado qalab casri ah oo heerkiisu sarreeyo. Qalabaynta laastikada ee duudduuban isku-darka kaarboonku waa 240GPa, oo ka weyn tan birta oo miisaankeedu aad u fudud yahay. Sidaa darteed, fir fircoonidu way yar tahay, taas oo si weyn u yareyn karta xiisadda ka dhalata alaabada sida warqadda duubka ah inta lagu guda jiro howlgalka, taas oo ka fiican isku duwidda dhulka ee dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare leh iyo xawaareynta degdegga ah ama dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca.
Hore: Tuubada Fiberglass-ka
Xiga: kaarboonka fiilada telescopic-ka ee tiirka daaqada
Tuuboyinka kaarboon kaarboon si loo qurxiyo
carbon fiber telescopic pole for cleanin daaqada ...
Carbon fiber-laba-tubbo isku xira
3K PlainTwill waxay jareysaa Xaashida Kaarboonka Fiber
Xaraashka taarikada liisanka kaarboon kaarboon